Dadka,ajaanibka ah Swiss ku wuxu ugu talo galay labo weji oo ku saabsan shaqada:
Dadka ka yimaada waddamada UE ee AELE waxay isla ogolaadeen ama ( isku raaceen ) in laysu dhex mari karo waddamadaas fiiso la’aan iyada oo loo fiirinayo qofkasta habka uu ku joogo iyo ( sababta uu u joogo)
Dadka u dhashay waddamada aan ahayn kuwi aan soo sheegney, Switzerland waxey ka shaqeeyn karan haddey heystan shahaado khibrad weyn leh keli ah. Waxayna ka shaqaeyn karaan hadii laga waayo dad khibradooda leh waddamadaas aynu soo sheegnay.haday shaqadaas helaan waa in qofka loo shaqeeynayaa u weydiiyo meesha uu degan yahay barmiiso shaqo.
Shaqaalaha iskood u shaqeeysta
Sharciga ay isku raaceen Swisska iyo Isutaga Yurub waxa weeye in dadka u dhashay waddamadan marka magacooda la soo gaabiyo laysku yiraahdo UE iyo AELE ay shaqo madax banaan ka furan karaan Swisska.
Dadka aan u dhalan waddamadaas aan soo sheegnay laguna magacaabo sidan (Etat-tiers) waxay sidoo kale xaq u leeyhihiin in ay furtaan shaqooyin madax banaan haddii ay haystaan barmiiso C ama (permis C) hadaanay buuxin shuruudan xaq uma leh.
Shaqaalaha ka soo tegay meeshi ay ka shaqayn jireen
Shaqaalaha ka yimi shaqadoodi ee doonaya in ay ka hirgeliyaan shaqo kale Swisska waxa lagu xiray shuruudo si loo ilaaliyo sharciga waddanka, ayna u dhicin in lagu shaqeeyo suuq madoow. Hadii ay ku soo dirtay shirkad degan waddamadan mid ka mid ah UE/AELE hadii madaxdaadu (Boss ) ilaalin waayaan sharciga shaqada ee Swisska u yaala, oo la soo dacweeyo, adiguna waxaad helaysaa dacwo la mid ah mida madaxdaada.
In this section: themen/arbeit/arbeitsrecht, themen/arbeit/arbeitslosigkeit, Shaqo raadin, Ururka shaqaalaha, Sinaanta, Shaqaalaha ajnabiga ah
Shaqaalaha ajnabiga ah